Igbe Slide Series Nsukka & Suppliers - China Igbe Slide Series Factory
Igbe Slide Series
A na-ere ngwaahịa anyị n'okpuru akara atọ akpọrọ akpọrọ: YANGLI, GERISS, HIFEEL. Ha bụ sistemụ drawer, zoro ezo slide, Ball amị slide, Isiokwu slides, zoro ezo hinges, ịlesụ, oven hinges na ndị ọzọ na ngwá ụlọ ngwaike ngwa, nke na-eji na ngwá ụlọ, oche, ụlọ ngwa oru wdg ...
Igwe anaghị agba nchara square shaf ...
Single ntị gas cooker oven ...
Clip-on kabinet mgbaberekwa conce ...
86mm Elu drawer n'akụkụ pan ...
150mm elu drawer slide s ...
Full Extension Synchronous N'ịga Soft emechi zoro ezo Igbe Runner Na 3D Front brackets
Ihe ndọtị zuru oke na-eme ka mmechi dị nro zoro ezo drawer nke nwere 3D n'ihu brackets na-ejikarị eme ihe maka kichin & ụlọ mposi Nke a na ụdị undermount drawer slide eji kemeghi skru na plọg plọg idozi osisi drawer. Inwe igwe TAIWAI zuru oke, nke nwere echiche di elu kacha mma ndi oru aka anyi ji nlezianya meputa ihe ngbaputa nke GERISS nke bu ihe kacha mma nke ulo oru ulo oru uwa.
Nodị No.: EUR33BS
17mm Single extension akụkụ ugwu telescopic drawer slide channel
Okwu Mmalite:17mm Single ndọtị n'akụkụ ugwu telescopic drawer slide ọwa mepụtara site na oke nkenke mmepụta akara na ule ngwá ngwaahịa na-arụ ọrụ ultra-jụụ na-eji ire ụtọ. About anyị bọl agba drawer slide nwere ụfọdụ dị iche iche obosara maka 17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm. Maka ogologo anyị nwere ike dịka ihe ị chọrọ si mepụta. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ọwa telescopic anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: YA.1701A
500lbs igbachi kpochisịrị oké ọrụ ngwá ọrụ igbe kabinet telescopic ọwa 76mm drawer slide
Okwu Mmalite:500lbs igbachi kpochisịrị oké ọrụ ngwá ọrụ igbe kabinet telescopic ọwa 76mm drawer slide mepụtara site na oke nkenke mmepụta akara na ule ngwá ngwaahịa na-arụ ọrụ ultra-jụụ na-eji ire ụtọ. About anyị bọl agba drawer slide nwere ụfọdụ dị iche iche obosara maka 17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm. Maka ogologo anyị nwere ike dịka ihe ị chọrọ si mepụta. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ọwa telescopic anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: YA.7602
Single Extension Soft Close Undermount Igbe Draịvụ na Kemeghi kposara na plọg
Okwu Mmalite:Single Extension Soft Close Undermount Igbe Draịvụ na Kemeghi kposara na plọg na-ejikarị maka kichin & ime ụlọ ịwụ oche. Nke a na ụdị undermount drawer slide eji kemeghi skru na plọg plọg idozi osisi drawer. Inwe igwe TAIWAI zuru oke, nke nwere echiche di elu kacha mma ndi oru aka anyi ji nlezianya meputa ihe ngbaputa nke GERISS nke bu ihe kacha mma nke ulo oru ulo oru uwa.
Nodị No.: EUR23A
Single Extension Soft Close Undermount Igbe Draịvụ na Front njikọta
Okwu Mmalite:Single Extension Soft Close Undermount Drawer Slide with Front Connectors na-ejikarị eme ihe maka kichin & ụlọ mposi. Nke a na ụdị undermount drawer slide eji kemeghi skru na plọg plọg idozi osisi drawer. Inwe igwe TAIWAI zuru oke, nke nwere echiche di elu kacha mma ndi oru aka anyi ji nlezianya meputa ihe ngbaputa nke GERISS nke bu ihe kacha mma nke ulo oru ulo oru uwa.
Nodị No.: EUR23B
Single ndọtị Push-emeghe Undermount Igbe Draịvụ na Kemeghi skru
Okwu Mmalite: Single ndọtị Push-emeghe Undermount Igbe Draịvụ na Kemeghi kposara na-eji maka kichin & ime ụlọ ịwụ cabinets Nke a na ụdị undermount drawer slide eji kemeghi skru na plọg plọg idozi osisi drawer. Inwe igwe TAIWAI zuru oke, nke nwere echiche di elu kacha mma ndi oru aka anyi ji nlezianya meputa ihe ngbaputa nke GERISS nke bu ihe kacha mma nke ulo oru ulo oru uwa.
Nodị No.: EUR23C
Mgbatị zuru ezu Soft-Close Undermount Drawer slide maka cabinets Frame - 16mm drawer board
Okwu Mmalite:Mgbatị zuru ezu adụ-nso na-ese ihe ntanetị maka ihe eji eme ihe - 16mm drawer board na-ejikarị eme ihe maka kichin & ụlọ ịsa ahụ. Nke a na ụdị undermount drawer slide eji kemeghi skru na plọg plọg idozi osisi drawer. Inwe igwe TAIWAI zuru oke, nke nwere echiche di elu kacha mma ndi oru aka anyi ji nlezianya meputa ihe ngbaputa nke GERISS nke bu ihe kacha mma nke ulo oru ulo oru uwa.
Nodị No.: EUR33A16
Soft nso zoro ezo undermount drawer ọgba ọsọ zuru ndọtị - 18mm drawer side board
Okwu Mmalite:Soft nso zoro ezo undermount drawer ọgba ọsọ zuru ndọtị - 18mm drawer n'akụkụ osisi na-eji maka kichin & ime ụlọ ịwụ cabinets. Nke a na ụdị undermount drawer slide eji kemeghi skru na plọg plọg idozi osisi drawer. Inwe igwe TAIWAI zuru oke, nke nwere echiche di elu kacha mma ndi oru aka anyi ji nlezianya meputa ihe ngbaputa nke GERISS nke bu ihe kacha mma nke ulo oru ulo oru uwa.
Nodị No.: EUR33A18
Silent soft soft undermount zoro ezo drawer slide zuru ndọtị na n'ihu mkpachị
Okwu Mmalite:Silent soft soft undermount zoro ezo drawer slide zuru ndọtị na n'ihu mkpachị na-ejikarị maka kichin & ime ụlọ ịwụ cabinets. Nke a na ụdị undermount drawer slide eji kemeghi skru na plọg plọg idozi osisi drawer. Inwe igwe TAIWAI zuru oke, nke nwere echiche di elu kacha mma ndi oru aka anyi ji nlezianya meputa ihe ngbaputa nke GERISS nke bu ihe kacha mma nke ulo oru ulo oru uwa.
Nodị No.: EUR33B16
Full ndọtị ala ugwu adụ nso drawer slides na kpochidoro ngwaọrụ
Okwu Mmalite:Full ndọtị ala ugwu adụ nso drawer slides na kpochidoro ngwaọrụ na-eji maka kichin & ime ụlọ ịwụ cabinets. Nke a na ụdị undermount drawer slide were kpochidoro clip clip na osisi drawer. Inwe igwe TAIWAI zuru oke, nke nwere echiche di elu kacha mma ndi oru aka anyi ji nlezianya meputa ihe ngbaputa nke GERISS nke bu ihe kacha mma nke ulo oru ulo oru uwa.
Nodị No.: EUR33B
Mgbati ndọtị zuru ezu iji meghee n'okpuru ihe ngosi ihe ndozi na-eji ihe eji agbanwe agbanwe
Okwu Mmalite:Mgbati ndọtị zuru ezu iji mepee n'okpuru ihe ngosi ihe nkiri na-eji ihe eji eme ihe na-ejikarị eme ihe maka kichin & ụlọ mposi. Nke a na ụdị undermount drawer slide eji kemeghi skru na plọg plọg idozi osisi drawer. Inwe igwe TAIWAI zuru oke, nke nwere echiche di elu kacha mma ndi oru aka anyi ji nlezianya meputa ihe ngbaputa nke GERISS nke bu ihe kacha mma nke ulo oru ulo oru uwa.
Nodị No.: EUR33C
Full Extension Side nọkwasịrị n'ịnyịnya Soft emechi Waya-nkata Slide
Okwu Mmalite:Full ndọtị Side nọkwasịrị n'ịnyịnya na-emechi Soft Waya-nkata Slide-ejikarị maka kichin & ụlọ ịwụ oche. Nke a na ụdị waya nkata slide eji kposara idozi nkata drọwa. Inwe igwe TAIWAI zuru oke, nke nwere echiche di elu nke ndi oru anyi mara mma nke oma bu ezigbo ihe ngbaputa nke GERISS nke bu ihe kacha mma nke ulo oru ulo oru uwa.
Nodị No.: EUR33S